.pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ
1 .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ on 3rd March 2011, 7:33 am
.pif ( .pif ရဲ့ ရှေ့က အဓိပ္ပါယ်ဖော်လို့မ၇တဲ့ Char တွေ eg. evac.pif ...) နဲ့ဆုံးတယ်ဗျာ autorun.inf, RECYCLER နဲ့ သုံးခု (တစ်ခါတရံ) ၄ ခုဖြစ်တတ်တယ်.
ခက်တာက command ထဲမှာ သတ်ရင် .pif က သတ်လို့ရပြီး autorun.inf ကို သတ်လိုက်ရင် Access denied ပဲပေါ်လာတယ်။
ပြီးရင် .pif ဖိုင်ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်...ကူညီပါဦးဗျာ ။ Antivirus လည်းတင်လို့မရလို့ပါ။
2 Re: .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ on 3rd March 2011, 9:18 am
ဘာဘာညာညာ.pif သည် command line virus ဖြစ်ပါသည် သူကိုက်ထားတဲ့ စက်မှာ ဘာ A/V မှတင်လို့မရပါ တင်ပြီးပါကလဲ မရမ်းပါ သူကို သတ်ချင်ရင် SaveMode ထဲကနေသတ်ပါ
Process explorer ကိုသုံး ပြီး root program တွေကိုအရင် kill
ပြီးရင် user နဲ့ system, system32 အောက်က root တွေကို ဖျက်ပါ
startup နဲ့ msconfig အောက်က command တွေကိုလဲ ဖျက်ပါ
Registry ကိုလဲ ဖျက်ပါ registry location ကိုတော့ msconfig မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ဒါဆိုရင် ရှင်းသွားပါပြီ
မြန်မြန်တော့သတ်နော် ကြာရင် Memory ဂန့်သွားလိမ့်မယ် သူ run နေတဲ့စက်က Buffer level အရမ်းမြင့်လို့ပါ...
3 Re: .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ on 4th March 2011, 6:36 pm
4 Re: .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ on 4th March 2011, 8:39 pm
5 Re: .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ on 8th March 2011, 9:28 am
ကို rat ရေ
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကို rat ရှင်းပြတာ တစ်ချို့နားမလည်လို့ပါ။ အဆင်ပြေရင် safe mode ထဲဝင်တာရဲ့ နောက်ပိုင်းကစပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ညီပြည်စုံရေ ညီနားမလည်တာလေးတွေကို အကိုလဲ သိသလောက်လေးပြောပြလိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး SafeMode ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ
အရင်ဆုံး msconfig ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် Process Explorer ကိုရမ်းလိုက်ပါ
Virus တမျိုးနဲ့တမျိုးက run တဲ့ name ချင်းမတူတော့ ထည့်မရေးပေးတော့ဘူးနော်
အဲဒီမှာ Explorer.exe အောက်မှာ run တဲ့ virus name တွေကို (ဥပမာ-newfolder.exe,update.exe,smss.exe,csrss.exe)ဆိုတာလေးတွေကို kill ပါ
ပြီးရင် msconfig ထဲမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ file location တွေကို uncheck (အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ) တခါတည်း registry နေရာလေးတွေပါမှတ်ထားပြီး သွားဖြက်လိုက်ပါ
အားလုံးရှင်းလို့ပြီးသွားရင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ virus remover tools လေးတွေကို run ပါ
ဒါလေးကတော့ vbs virus လေးတွေကို remove လုပ်တာပါ
ဒါလေးကတော့ system file တွေ hidden အလုပ်ခံထားရတာလေးတွေကိုကြည့်တာပါ virus တွေကိုလဲ ဒါလေးသုံးပြီးဖြက်လို့ရပါတယ်
မှတ်ချက်၊ ၊မမြင်ရလို့ မှန်းပြီးရေးပေးလိုက်တာပါ လိုအပ်တာလေးတွေလဲ ရှိနိုင်ပါသေးတယ် လိုအပ်တာတွေရှိခဲ့ရင် နားလည်ပေးပါ
6 Re: .pif virus သတ်မရလို့. ကူညီကြပါဦးဗျာ